Ukuhlaziywa kweWebhu ye-Semalt
Ukwenza ukuthi amawebhusayithi akho afinyelele amandla ayo aphelele akulula njengoba kungenzeka. Futhi ngiyaqiniseka ukuthi kungenzeka ukuthi usukubonile lokho manje. Kuthatha ukuqapha njalo, ukusondeza, nokuhlaziya ukuze uqinisekise ukuthi wenza izinto ngendlela eyiyo. Izikhathi eziningi ukubuyekeza okunjalo kungcono lapho kwenziwa ngabachwepheshe abanolwazi lokwazi okufanele bakubheke kuwebhusayithi yakho. Njengosomabhizinisi, siyaqiniseka ukuthi usunenkolelo yokuthi kungcono ukuzenzela izinto ngokwakho. Noma kunjalo, akekho umuntu oyisiqhingi. Ukwenza uzizwe ungcono, ngoSemalt, uyazi zonke izinyathelo esizenzayo ekwenzeni iwebhusayithi yakho ibe mihle.
Ngakho-ke ungacabangi ngakho njengoba ubeka iwebhusayithi yakho kulawulo lwethu kodwa kunalokho uyithathe njengezokubambisana. Ngale ndlela, singadlulisela kangcono umbono wakho kuwebhusayithi yakho futhi siqinisekise ukuthi uzikhiqizela umkhondo wakho.
Ukuqonda izisekelo zokusetshenziswa kwe-SEO, singasikisela ukuthi uhlole isayithi lethu ukuze ufunde kabanzi. Sinezinto eziningi zokuqukethwe zokufunda ukukusiza wazi ukuthi singakusiza kanjani.
Lapha, sixoxa ngawo wonke amathuluzi adingekayo ekuhlaziyeni ngokuphelele amawebhusayithi. Lokhu akubandakanyi okwakho kepha nemincintiswano yakho. Lokhu kuthola ukusetshenziswa kwamagama angukhiye kuwebhusayithi yakho, futhi kuhla namagama akho asemqoka. Siphinde futhi ukukukhombisa ikhasi lakho lokushayela ngethrafikhi (leli ikhasi elivakashelwa iningi labantu), futhi sinquma isikhundla sakho kumiphumela yosesho ye-organic.
Lapho sibheka ukuncintisana kwakho, sithola ukuthi ulahlekani. Ukufunda amamethrikhi emiqhudelwano kusivumela ukuba siqonde izizathu zokunyuka kwesibalo sezimoto. Sibe sesisebenzisa lolu lwazi kusayithi lakho.
Siyaziqhenya ngokuchaza nangokuphula izinto ukuze sikusize uqonde. Asithandi indlela "engibukela ngayo." Esikhundleni salokho, lokhu sikwenza ngokubambisana. Ngale ndlela, sobabili sihlanganisa amakhemikhali kwelebhu yamakhemikhali "ngokomfanekiso," futhi asizishiyi zonke izinto ezimnandi kubafundi be-briny.
Ngokwencazelo, i-SERP imele Ikhasi Lomphumela Wenjini Yokusesha. Lawa ngamakhasi aboniswa ngezinjini zokusesha lapho umsebenzisi noma esimweni se-Semalt ecela sona. Inhloso yokuqala yalomphumela ukuqonda ukuthi amagama asemqoka asetshenziswa kanjani kahle kuwebhusayithi yakho.
I-SERP ikhadi lakho lembiko lewebhusayithi yakho. Kubandakanya isihloko, isixhumanisi ekhasini lakho le-web, nencazelo emfushane. Le ncazelo ikhombisa lapho amagama agqamile afane nokuqukethwe ekhasini. Lokhu kusho ukuthi awunakuba newebhusayithi ekuthengisweni kwezimoto, futhi amagama akho abalulekile angamaFishi, uLwandle, i-Aquarium, njll. Uthola iphuzu. Yimaphi amagama okhiye owasebenzisayo adinga ukuhambisana nezinsizakalo ozihlinzekayo. Uma kungenjalo, iwebhusayithi yakho izoqhubeka nokuheha ababukeli abangalungile.
Ngenxa yemininingwane equkethwe kulo mbiko, imvamisa iza ngamakhasi ambalwa. Yize ungakhawulela okukhonjiswayo, sincamela ukungena ngokugcwele, ngokuwela wonke ama-T nokuphawula ama-I.
Ukubuka lo mphumela, ikhasi lokuqala linemininingwane efanelekile. Njengoba uqhubekela ngasekupheleni kombiko, ukuhambisana kwemininingwane ekuqukethe kuyanciphisa uze wenze umqondo wakho ukuthi ungaqhubeki. Njengokukhangisa noma empeleni empilweni, izinto ezibaluleke kakhulu ziza kuqala.
Ekugcineni, i-SERP ikukhombisa ukuthi iwebhusayithi yakho ithatha siphi isigaba ekilasini leziza. Futhi njengoba uhola uhola usebenzisa amagama angukhiye, uthola ukuqonda ukuthi wenzani okungalungile nokuthi yini okudingeka uyilungise. Ngokwazi okungalungile, sazi ukuthi kufanele sisebenzele kuphi.
Kunezingxenye ezine zeSERP. Sinezikhangiso ezikhokhelwe zokusesha, imiphumela yokusesha ye-organic, imiphumela yosesho lwasendaweni, kanye nokusesha okuhlobene.
Izikhangiso ezikhokhelwe zokucinga: le yindlela yokuthola ithrafikhi engenakubalwa. Lapha, ukhokha iGoogle ukwenza iwebhusayithi yakho yenze kahle ngokuheha ukunaka kwababukeli kuyo. Ngale ndlela, isayithi lakho lithola ukubukwa, kepha lokhu akuhlali kukuhola. Futhi, akunasiqiniseko sokuthi lapho uyeka ukukhokhela lezi zikhangiso, uzoqhubeka nokuthola ithrafikhi ephezulu kusayithi lakho.
Imiphumela yokusesha ye-Organic: lokhu kubhale uSemalt kuyo yonke indawo. Yilapho usebenzisa i-SEO ukudonsela ithrafikhi kwisiza sakho ngokwemvelo. Imiphumela yokusesha yendalo ithathwa njengethembekile. Ngokusebenzisa ochwepheshe kwe-SEO, i-gig yakho ihlala iba phezulu ekhasini eliphezulu le-Google. Lokhu kunikeza iwebhusayithi yakho ithuba elingcono lokuguqula lokhu kuchofoza kumakhasimende.
Imiphumela yokusesha yasendaweni: lapha, ubona uhlu, imephu, kanye noxhumana namabhizinisi ngaphakathi kwe-search radius. Irediyo yokusesha inqunywa yinqwaba yemibandela nokuthandwa ngumsebenzisi. Lokhu yingakho kubalulekile ukuthi izinkampani zizisungulele ngaphakathi kwebhizinisi le-Google.
Ukusesha okuhlobene: Usesho oluhlobene alunakwa kaningi. Lawa ngamabhokisi amancane owabona ngezansi kwekhasi lemiphumela ngemuva kokuthi usesho noma yini. Lokhu kudalwe ngokususelwa kumagama angukhiye umsebenzisi awasebenzisile ebhokisini lokusesha.
Kodwa-ke, i-SERP yezinjini ezinkulu zokucinga ezifana neGoogle, Bing, ne-Yahoo zingabandakanya izici ezimbalwa zemiphumela ezithuthukisiwe. Kubandakanya izinto ezifana nekhwalithi yamazwibela akho, izithombe, amamephu, izincazelo ibhokisi lempendulo, njll.
Yaziwa nangokuthi yintambo yokucinga yomsebenzisi, leli igama noma umugqa wabasebenzisi bamagama uthayipha ebhokisini lokusesha. Uyazi ukuthi ungasesha kanjani noma yini ku-Google? Yebo, kunezindlela eziningi umsebenzisi angaziseshela, kepha amagama angukhiye asalungiswa.
Kepha uma izinjini zokucinga zincike kulokho umsebenzisi akuthayipha yedwa, amasayithi amaningi awasoze akubona ukukhanya kosuku. Ngakho-ke, izinjini zokucinga ziguqula i-algorithm yayo kanye nobuhlakani obujwayelekile bosesho lwayo.
Umbuzo wokusesha awusenakwenzeka ngokususelwa kuphela kulokho okufunwa ngumsebenzisi. Esikhundleni salokho, izinkampani ezifana ne-Google factor kwezinye izinto ezihlukile. Ngokuhamba kwesikhathi, ingqikithi ikhule kusuka kumagama nje ahambisana nokuqonda okukhaliphile. Ngale ndlela, amagama alahliwe ayalungiswa, futhi amagama ahlobene nawo ayakhonjiswa.
Okuqukethwe kukubonisa ukuthi iGoogle iphatha kanjani iwebhusayithi yakho. Ngabe bakubheka njengomthombo ohlukile noma cha? Lapha, ungabheka amaphesenti aqondile wokuthi okuqukethwe kwakho kuhlukile kangakanani. Sonke sifuna ukuba ngabakhethekile noma abahlukile, futhi lesi sici sisisiza ukufeza lokho. Ngokuqukethwe, ufunda ukuthi iziphi izingxenye zombhalo wakho ezichazwa, futhi uthola ukubheka emthonjeni oyinhloko.
Akekho umuntu oyisiqhingi, ngakho-ke lindela ukubona okuncane okubhala kabi. Kungumsebenzi wethu, noma kunjalo, ukwenza umbhalo wakho uhlukile futhi ukhethekile ngangokunokwenzeka. Noma uqoqa imininingwane kusuka kweminye imithombo, udinga ukuyenza eyakho, engeza okuncane kwakho futhi ube yinkampani kuyo. Lokhu kuhamba ibanga elide ekusizeni abafundi bakho ukuthi baxhumane kangcono nenkampani yakho nomkhiqizo.
Ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi esisebenziseka kalula, singaphatha amawebhusayithi amaningi ngasikhathi. Ngokuthumela izizinda zakho noma ama-URL ku-Google, singakwazi ukulandelela ukusebenza kwawo kalula. Ngomphathi wewebhusayithi yeGoogle, unawo wonke amathuluzi owadingayo wokuqapha nokwenza ngcono isayithi lakho. Ukuze ujabulele izinsizakalo zomphathi wewebhusayithi weGoogle, okokuqala udinga ukudala i-akhawunti. Umphathi wewebhusayithi weGoogle uyithuluzi elibalulekile lempumelelo yanoma iyiphi iwebhusayithi. Kuya kude ukukubonisa ukuthi iwebhusayithi yakho isebenza kanjani kumafoni nakumathebulethi, bona amanye amasayithi axhumene nokwakho, futhi ihlaziya imibuzo yakho.
Umphathi wewebhusayithi weGoogle angakuqapha kanjani ukusebenza kwewebhusayithi yakho?
Kuqinisekisa ukuthi iGoogle ingakwazi ukufinyelela okuqukethwe kuwebhusayithi yakho
Ikuvumela ukuthi ungeze futhi ususe amakhasi kumawebhusayithi akho
Kukusiza ukuhlola iwebhusayithi yakho futhi uthole izindlela zokunikeza umuzwa ongcono wabafundi bakho.
Ungayigcina iwebhusayithi yakho ngaphandle kokuphazamisa ukubakhona kwayo emiphumeleni yokucinga.
Ungathola futhi ususe izinkinga ze-malware noma ogaxekile okungenzeka ukuthi zingene emfuleni uma zifunwa ngenye indlela.
Umphathi wewebhusayithi weGoogle uyithuluzi elibalulekile lapho kuhlaziywa amawebhusayithi. Kuyasikhombisa ukuthi kufanele senzeni nokuthi kufanele senzeni.
Lokhu kuhlaziya ukuthi amakhasi akho wewebhu ashesha kangakanani. I-Google isebenzisa lokhu kuhlaziya ukuthola ukuthi amakhasi akho noma iwebhusayithi ihlangabezana nezidingo ze-Google. Lapha, uzokhonjiswa namaphutha akhona okuzodingeka uwalungise kuwebhusayithi yakho nokuthi ungawathuthukisa kanjani amawebhusayithi akho.
Imvamisa, ungathanda iwebhusayithi elayisha amakhasi ngokushesha. Noma yini ende ngaphezu kwemizuzwana eyi-10 iqala ukuzwakala sengathi usuku lonke. Yingakho ukuba namawebhusayithi okulayisha okusheshayo kungcono kuwe nakubabukeli bakho. I-Google ifuna ukuthi abasebenzisi bayo bajabule, okusho ukuthi badinga amawebhusayithi asheshayo. Ngakho-ke iwebhusayithi yakho idinga ukushesha ngangokunokwenzeka ukuze iGoogle ibeke iwebhusayithi yakho. Futhi sidinga lokhu ukuze iwebhusayithi yakho ivele kusesho oluphezulu, kunikeze ibhizinisi lakho amathuba amaningi okukhula.